Muuri News Network » R/wasaarihii hore Cali Geedi Waa maxay aragtidiisa maqaamka Muqdisho?
R/wasaarihii hore Cali Geedi Waa maxay aragtidiisa maqaamka Muqdisho?
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geeddi ayaa sheegay in maqaamka Muqdisho uu yahay arrin dastuuri ah oo waajib ku ah cid kasta oo xilka qaranka qabata.
Isagoo ka hadlayay munaasabad lagu soo dhoweynayay Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Eng. Yariisow ayuu sheegay in magacaabidan ay ka duwan tahay kuwii hore.
“Waxaa is leeyahay magaacida Eng. Yariisow waa ka duwan tahay kuwii hore, waa markii u horeysay Wasiir dhow xil soo qabtay Guddoomiyaha Gobolka loo magacaabo, taas macnaheedu waa in maqaamka Caasimadda in sare loo qaado”ayuu yiri Cali Maxamed Geeddi.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in aanay jirin cid shaki gelin karta maqaamka ay dadka jecel yihiin iyo xuquuqda ka maqan dadka deegaanka.
“Maqaamka ay dadka jecel yihiin iyo xuquuqda deegaanka ka maqan ma ahan kuwo shaki ku jira, waana mid dastuuri ah oo cid kasta waajib ku ah oo qarankan qabata”ayuu yiri Cali Maxamed Geeddi.
Taabid Cabdi Maxamed ayaa xilkiisa ku waayay kaddib khilaaf ka dhashay maqaamka Caasimadda, iyadoo lagu waday in 28-ka bishan la qabto shir looga hadlayay Nabadeynta iyo Horumarinta Gobolka Banaadir oo looga hadli lahaa maqaamka Muqdisho.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay waxyaabihii dhaliyay khilaafka siyaasiga ay ka mid yihiin Xasiloonida gobolka Banaadir oo is guud iyo si gaar ahba ugu baahan nabadoonimo iyadoo la ilaalinayo sareynta sharciga iyo shirkii wadatashiga nabadaynta iyo horumarinta gobolka Banaadir.